फ्रेवुअरी 11, 2017 नोभेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक0Comments धोका, प्रेम
असल र सोझा केटाले मात्र किन पाँउछन प्रेममा धोका ? भनिन्छ सोझै रुख सदैव पहिला नै काटिन्छ । प्रेममा पनि यही नियम लागु हुन्छ किनकी असल र सोझा केटाले मात्र बढी प्रेममा धोका खाने गर्छन । प्रायः खराब केटाले असल जीवन साथी पाउँछन् र यस्ता केटाका साथ धोका हुन्छ जसले भित्री हृदयदेखि नै प्रेम गर्छन । त्यसो भए असल र सोझो हुनु के पाप हो त ? अवश्य पनि हुन सक्दैन ।
← प्रेम गर्नेहरुका लागि जनवरी ९ किन खतरनाक ?
राखौँ मान धराको →
नोभेम्बर 13, 2018 नोभेम्बर 22, 2018 साइन्स इन्फोटेक 18